Ogaden News Agency (ONA) – Magaalada San Diego oo Banaanbax lagaga soo horjeedo Xukuumadda Wayaanaha uu ka dhacay
Magaalada San Diego oo Banaanbax lagaga soo horjeedo Xukuumadda Wayaanaha uu ka dhacay
Maalinamadii Axadda May 11,2014 ayay jaaliyadda S.Ogadenya ee jaaliyadda Oromiya ee magaalada San Diego, California banaabax ka dhigeen magaalada ay ku diidan yihiin xasuuqa ay dawladda Itobiya u gaysatay dadka shacabka ah. Banaabaxayaasha oo ka koobnaa dad kor u dhaafaya 300 oo lulaya calamada labada qawmiyadood iyo boodhah ay ku qoran yihiin ereyo laga soo horjeedo xukuumadda Wayaanaha ayaa isugu yimid Xarunta Fairmont Avenue halkaasoo ay masuuliin ka socota Itobiya doonayeen inay ku qabtaan shir lacag loogu ururinayo Biya-xidheenka.
Waxaa shirka u yimid dad aan ka badnayn tobaneeyo oy kolba galbinayeen koox ay Amniga ah oo safaaradda soo kiraysatay (Private Security) kuwaasoo goobta shirka uu ka socdo ilaalinayay. Waxaa kaloo ay u yeedhatay safaaradda booliska magaalada si amnigooda loo ilaaliyo.
Banaabaxa oo ka dhacay magaalada badhtankeeda ayaa waxaa yimid wariyayaal badan iyo TV-yada sida Chanel 10 News oo dadkii banaanbaxayay wareysiyo la yeeshay. Waxaa dul heehaabayay banaanbaxa oo sawirayay Dayaaradaha Qumaatiga u kaca (Helicopter). Boodhadhka ay wateen Banaanbaxayaasha iyo ereyada ay ku dhawaaqayeen oo soo jiitay saxafiyiinta ayaa waxaa ka mid ahaa kuwan:
“NO HUMAN RIGHTS INETHIOPIA,”
“NO DEMOCRACY INETHIOPIA,”
“NO JUSTICE INETHIOPIA,”
Banaabaxa oo socday in kabadan 4saac ayaa ku dhamaaday si nabadgalya ah iyadoo aan qofna laga xidhin. Banaabaxayaasha ayaa u gudbiyay saxaafada dhibaatada ay xukuumadda EPRDF ku hayso dadka shacabka iyagoo ka codsaday in dawladda Itobiya lagula xisaabtamo arintaa.
Sidaan la socono, waxaa ka socda daafaha caalamka banaanbaxyo lagu diidan yahay xasuuqa ay xukuumadda Wayaanaha ku hayaan labadan qawmiyadood ee Ogadenya iyo Oromiya , banaanbaxyadaa oy ku qabanayaa labada jaaliyadood si caalamka u arko dhibaatada lagu hayo shacabka Somaliyeed ee Ogadenya iyo shacabka Oromiya.